Ny chip T2 dia mampangina ny micro an'ny iPad Pro ka tsy afaka mitsikilo antsika | Vaovao IPhone
Eny, manohy ny vaovao mifandraika amin'ny iPad Pro 2020 vaovao natolotr'i Apple tamin'ny volana martsa lasa teo izahay ary ity iPad ity dia manampy andraikitra lehibe eo amin'ny sehatry ny fiainana manokana momba ny mpampiasa, ary izany dia noho ny chip T2 izay nampiana ao anatiny ao anatin'ilay fitaovana mikrô dia nofoanana tanteraka amin'ny alàlan'ny fitaovana ka tsy azon'izy ireo atao ny mampihetsika azy.
Ny fanafoanana ny mikrô dia mitaky ny fanidiana ny fonon'ny iPad Pro ary tsy misy afa-tsy amin'ireo maodely vaovao, izay misy ireo puce ireo. Toy ny amin'ny MacBook Pros 2019 vaovao, ny fiarovana sy fiainana manokana misaotra an'ity puce ity dia mitombo be.
Ny holatra rehetra an'ny MFI dia manohana an'io endri-javatra io
Ary momba izany akatona ny sarony Miaraka amin'ny fonony sy amin'ity dingana ity no hany ilainao dia kojakoja mifanentana izay voamarina fa Apple MFI. Ity fanamarinana ity dia ampiana vokatra marobe ananantsika eny an-tsena ary anisan'ireny ireo izay amidin'i Apple amin'ny tranokalan'ny marika toa an'i Logitech, Simmetry, Dux, sns., Ankoatry ny an'ny orinasa, mazava ho azy.
Azontsika atao ny milaza fa ity dia fomba iray mivantana hitazonana ny fiainana tsiambaratelon'ny olona amin'ny fomba mivantana ary raha vantany vao mikatona ny saron'ny iPad dia tapaka amin'ny alàlan'ny fitaovana ny mikrôfo ka tsy afaka hampihetsika azy amin'ny lavitra. Ny orinasa dia afaka mampihatra io asan'ny fiarovana io amin'ny sisa amin'ny fitaovana izay aroson'izy ireo amin'ny ho avy ary izany dia ny fakantsary iPad feno rakotra mandrakotra ankehitriny ka tsy afaka ny "mahita" zavatra ataontsika rehefa tsy ampiasaina ilay fitaovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Ny chip T2 dia mampangina ny micro an'ny iPad Pro ka tsy afaka mitsikilo antsika izy ireo
Andininy manan-danja iray hafa dia izao hampiharina amin'ny modely Apple manaraka, noho izany dia zavatra tena mahaliana amin'ny fiainana manokan'ny olona.
Ny zava-drehetra dia toa manondro fa tsy misy ny chip U1 ao amin'ny iPad Pro 2020